ပန်ဒိုရာ: အသံများ လှုပ်လို့ လီလို့ လှည့်လို့ ခေတ်က တခစ်ခစ်နဲ့
သရုပ်ဖော်ပုံ ဒီနေရာကို သွားပြီး ပန်ဒိုရာ လျှောက်ခြစ်ထားသည်။
အသံများ လှုပ်လို့ လီလို့ လှည့်လို့
အသံတွေ သန့်စင်လား အသံတွေသန်မာလား
အသံနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ ထိခိုက်ရှနာများ
အသံကို အသံက ချောင်းမြောင်းလုပ်ကြံ
အသံကို အသံက အခါတော်ပေး
အသံရှေ့ အသံတွေ လက်ညှိူးထောင်ခေါင်းငြိမ့်
အသံရှေ့ အသံတွေ ဒူးတုတ် ဦးညွှတ်
အသံရှေ့မှာ အသံတွေ နာတာရှည် အဖျားသွေးဝင်ခဲ့
အသံကို အသံတွေက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သ
အသံကို အသံတွေက စိုးရိမ်ကြောင့်ကျ
အသံကို အသံတွေက လည်တဆန့်ဆန့်မျှော်လင့်
အသံရှေ့မှာ အသံတွေ အလံမလှဲခဲ့ကြဘူး
အသံတွေ သံချေးစား အသံတွေဟာ နင်းပြား
အသံသေး အသံညောင်များ အသံဝါ အသံပြာများ
နံရံက ပြန်ကန်ထွက် အသံများ
ကြမ်းကြားက လေကြားက အသံများ
အသံတွေ ကောက်ပင်ရိပ်လှီး လိုက်သံများ
အသံတွေ ရေကူးညာတင် နေသံများ
အသံတွေ ငါတကော သူတကော
ဘယ်သံများ ညာသံများ ဘယ်သန် ညာသန်များ
အသံဟာ သံသရာတစ်ဖက်ကမ်းအထိ တွင်းတူးမိုက်ခဲ့တယ်.။
ခေတ်တိုင်းမှာ လူသံတွေကြားရတယ် အူသံတွေကြားရတယ်
ခေတ်တကော ကော သူတွေရှိတယ်
ခေတ်ကျန် ခေတ်ဆွေး ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေရှိတယ်
ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကို တော်လှန်သော တော်လှန်ရေးများ ရှိတယ်
ခေတ်ကောင်းက ခေတ်ဆိုး အနိုင်ကျင့်တာကို ခံရတယ်
ခေတ်ဆိုးကိုတော့ လူတွေက အနိုင်ကျင့်တယ် (ဟင်း.. လူဆိုးတွေ) :P
စိတ်ညစ်လို့ အရက်သောက်တာ ခေတ်ကြီးကြောင့်
အအေးမိလို့ ဟပ်ချိုးချေတာလည်း ခေတ်ကြီးကြောင့်
ခလုပ်တိုက် ဖားပြုပ်ကိုက် တရုတ်ရိုက်တာလည်း ခေတ်ကြီးကြောင့်
ရွှေခေတ် ငွေခေတ် ပတ္တမြားခေတ်
တို့ခေတ်.. ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ
အဲ… ဒါ…. ဒို့ဗမာ။
Posted by pandora at 12:56 AM
ညကြီးမင်းကြီး ကဗျာထတင်တဲ့ အမြွာညီအမ ရဲ့ ကဗျာ ၂ ပုဒ်ကို တခစ်ခစ် အသံထွက်အောင် လာဖတ်သွားပါတယ်။
ပန်. နဲ့ အိန္ဒြာ
.. ခေတ်ထဲက အသံတွေကို မြင်လိုက်ရသလို
ငါ့ ညီမ နှစ်ယောက်စလုံးကို လက်ဖျား ခါသွားတယ်။ :)
အစ်မမိုးချိုသင်း ဆေးလိပ်မီး ကိုင်မိလို့ပါ :P
အမာပူး မှန်း ဒုမှ သိဒယ်..း)
ဟိုမှာလည်း မန့်ပြီးပြီမို့ ထပ်မမန့်တော့။
ပေးတဲ့လင့်ခ်အတိုင်း သွားပြီး လျှောက်ဆော့ကြည့်ခဲ့တယ်။ အမိုက်သား။ ကျေးကျေးစ် တီပန်။
ခွိ... တံခါးညပ်လို့လည်းမဟုတ်၊ ဆေးလိပ်မီးကိုင်လို့လည်းမဟုတ်
အန်တီချိုသင်းကြီး ဘာကိုစမ်းမိတယ်မသိ။ :P
ခေတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးမြင်ရင် "ခ" နဲ့ "တ်" နဲ့ကို ပူးပူး ကြည့်နေမိတယ်။ :P
ခေတ်က တခစ်ခစ်နဲ့ အဲ… ဒါ…. ဒို့ဗမာ။ အသံမှာ အဆန်ပါမလာတော့ဘူး...